Mamiriro ekunze Ekuita Kutsigira Ja Ja, kwete Blah Blah, Chizvarwa Chitsva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Awards » Mamiriro ekunze Ekuita Kutsigira Ja Ja, kwete Blah Blah, Chizvarwa Chitsva
Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • ICTP • nhau • vanhu • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Vashandi veCentre for Responsible Travel (CREST) ​​uye Board of Directors vakatanga iyo yegore Marita Honey Legacy Mubairo mu2019 senzira yekuziva mumwe munhu muindasitiri yepasirese yekushanya uyo ari kuita musiyano wakakura mukusundira envulopu mukufamba kwakanaka.
Mubairo uyu unocherekedza yakakosha nguva yakareba yegirini yekushanya kwekufunga inofunga hutungamiriri hwaMartha Honey, mune rukudzo rwainopihwa.
Martha Honey ndiye Co-Muvambi uye Director Emeritus weCentre for Responsible Travel (CREST), iri muWashington, DC.
Kwemakumi maviri emakore apfuura, akanyora uye akadzidzisa zvakanyanya nezve ecotourism, kukanganisa kushanya, kufamba uye kushanya kwekushanya, shanduko yemamiriro ekunze, uye nenyaya dzechitupa.
Gore rino, VaGeoffrey Lipman, Co-muvambi weSUNx - Strong Universal Network, uye Mutungamiriri we International Climate & Tourism Partner (ICTP), yakaziviswa semugashiri we2021 we2021 Martha Honey Legacy Award kubva kuCREST.
Anotevera ndeekutaura kwaVaLipman pakugamuchira mubairo unoremekedzwa:
Ini ndoda kutenda CREST neichi chakakurumbira mubairo uye kuti ndizive yakakosha kwenguva yakareba-yakasvibirira yekushanya kwekufunga inofunga hutungamiriri hwaMartha Honey, mune rukudzo urwo rwunopihwa. Ndiri kufara isu takatengesa mifungo mune yakasimukira nguva yekutanga kwema1990 uye kwete mune yakasarudzika, kuvenga Vakatapukirwa, nyika yeTrumpian yanhasi. Izvo zvakatibvumidza isu kuuya kune imwechete nyaya kubva kwakasiyana maonero, nerunyararo uye nehunhu.
Ini ndinogamuchira iyo Mubairo, kwete zvakanyanya kwandiri, asi sekubvuma kwekurudziro kwandakagamuchira kareko kubva kushamwari yangu uye chipangamazano kwemakore makumi maviri nemashanu, mushakabvu Maurice Strong - kuenderera uye muratidziri wemamiriro ekunze hafu yezana ramakore rapfuura.
Uye ndinoshamiswa nezvaakawana padanho repasi rose.
Maurice Strong mumwechete akaronga 1972 Earth Summit uye 1992 Rio Earth Summit - iine 124 Heads of State. Ndiani akafunga nezvekuzvarwa kweUNEP, IPCC, UNFCCC, Earth Charter, uye chipo chaTed Turner chemadhora emadhora kuUN Foundation. Uye zvakare zvine nharo yaive neminwe yeminwe pane iyo MDGs, iyo SDGs, uye Paris Climate Accord.
Sekuona kwake kwakabikwa muDNA yeSUNx Malta, nhaka kwaari muTravel & Tourism nzvimbo, EU-based NGO, yakabatana nehurumende yeMalta kufambira mberi. Mamiriro ekunze Anoshamwaridzana Kufamba.
Mharidzo yangu nhasi, kubva SUNx Malta, pamwe nekutenda kwangu chaiko kuCREST kweiyo Mubayiro, ine mapoinzi matatu.
Imwe, Iyo Dambudziko reMamiriro ekunze iripo - inoda kuve kwedu kwekutanga tarisiro. Uye inochida izvozvi. Iri ndiro gore rinopisa zvakanyanya mundangariro dzichangoburwa, nemhedzisiro ine njodzi yakawedzera pasi rose. Yedu yazvino 2030 emissions trajectory ndeye 16% kuwedzera pane iyo 50% kuderera kunodiwa kuti urambe uri munzira kusvika kune 1.5-degree muganho.
Chechipiri, Iyo Glasgow Tourism Chiziviso idanho munzira, asi isu tinofanira kuenda kumberi, nekukurumidza. Tinoda DASH-2-Zero, Net Zero Carbon 2030 pane 2050 uye na2050 (3 makumi emakore kure) isu hatidi No GHG. DASH inomirira Kuzivisa: Chiito: Tsigiro uye Tariro.
Tatu, tariro yedu yepamusoro ndeyeVechidiki, avo sezvakataurwa naGreta Thunberg achafanirwa kuchenesa nyonganiso yedu. Vechidiki vemazuva ano ndiJa Ja - Hongu tinogona kuburitsa. Kwete iyo blah blah - seye Thunberg inoreva yedu. Ivo vachatora matanho akaomarara anodiwa kuti vararame neCle Climate Crisis - nekuti haisi kuenda.
Uye isu tinofanirwa kuvapa Tsigiro uye Tariro yakavakodzera.
Sekutaura kwevaInnuits, "Hatigare nhaka yenyika kubva kumadzibaba edu, tinoitora kubva kuvana vedu." Ndatenda
Nezve SUNx Malta
SUNx isangano reEU-risingabatsiri, rakagadzwa senhaka yeMaurice Strong, piyona wemamiriro ekunze nekusimudzira, uye yakabatana nehurumende yeMalta.
SUNx Malta yakagadzira iyo "Green & Yakachena, Yemamiriro ekunze Yehukama Yekufamba Sisitimu" iyo yakagadzirirwa kubatsira Makambani Ekufamba & Ekushanya nenharaunda kushandukira kune nyowani Yemamiriro ekunze Ehupfumi. Chirongwa ichi chakavakirwa pakudzikisa kabhoni, kusangana neZvinosimudzira Kubudirira Zvirongwa, uye kuenzanisa nzira yeParis 1.5C. Icho chiito uye chakanangana nedzidzo - chakatsigira makambani anhasi nenharaunda kupa zvido zvavo zvemamiriro ekunze uye kukurudzira vatungamiriri vechidiki vemangwana kuti vagadzirire kupa mubayiro mabasa munharaunda yese yekufamba. Mubatsiri wayo uye Mutungamiriri ndiPurofesa Geoffrey Lipman.
SUNx Malta iri kudaidzira DASH-2-Zero yeiyo inofambisa chikamu cheKufamba & Yekushanya. Kusundira kune rimwe danho nekukurumidza. Hongu, kuNet Zero Carbon, asi panosvika 2030 uye kuzvipira ku NO Greenhouse gases na2050. DASH zvinoreva Zivisa & Ita neRutsigiro & Tariro. ZUVAx Malta iri kudzidzisa zviuru zvine gumi zvevadiki veState Climate Champions kumatunhu ese eUN muna 100,000. Pamwe chete nevatinoshanda navo Sustainable Development Goal (SDG-2030), tiri kupa UNFCCC yakabatana Registry Yekukurumidza Chido uye rutsigiro rweMamiriro ekunze Makambani nenharaunda.
Kuti uwane rumwe ruzivo ndapota bata, Olly Wheatcroft [email inodzivirirwa]
November 21, 2021 pa 23: 31
Hablan de Cambio Climático y la Elite Luciferinas nos gasean todos los día con el “Proyecto HAARP” desde mas de 20 anos, y nuestros océanos estan llenos de los barriles de residuos de Uranios 238… ..!¡